Mandritsara : Mpiasa roa mangalatra gazoala | JIRAMA
Mandritsara : Mpiasa roa mangalatra gazoala
Nitrangana halatra gazoala tao amin’ny tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA ao Mandritsara ka mahavoarohirohy mpiasa roa sy olon-tsotra maromaro
Mpiasan’ny JIRAMA roa tao Mandritsara no notanana am-ponja nohon’ny halatra gazoala. Rehefa natao ny fanadihadiana, izay natomboka tamin’ny fitsinjarana ny fandaniana gazoala isan’andro dia tsikaritra fa eo anelan’ny 120 litatra ka hatramin’ny 150 litatra ny fahabangana. Mbola eo am-panatanterahana fanadihadiana kosa ireo manam-pahefana hahafantarana ny totalin’ny fatrana gazoala navoaka antsokosoko avy ao amin’ny tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA.
Miavaka ny gazoala ampiasain’ny JIRAMA raha oharina amin’ny gazoala amidy any an-toerana
Nampanantsoina ary notanana eny amin’ny zandarimaria avokoa ireo olona folo voatonontonona tamin’ity raharaha ity. Ny roa amin’izy ireo no mpiasan’ny JIRAMA ao Mandritsara, ny efatra mpamily Bajaj ary ny efatra ambiny mpividy ny gazoala halatra izay mbola nahatrarana izany. Ny herinandro ho avy io no fantatra fa hiakatra fitsarana ity raharaha ity.
Ny mpitantana ny JIRAMA dia miantso hatrany fiaraha-miasa amin’ny rehetra hampandre ny manam-pahefana raha misy tranga halatra gazoala tahaka izao, izay miteraka fatiantoka goavana ho an’ny orinasa. Tsy mandefitra na amin’iza na amin’iza manao izao asa ratsy izao ny mpitantana ny JIRAMA.